Iskuul Dadaallo ka Sameeyey Sara U Qaadidda Waxbarashada Galkacyo
Dugsiga Hoose ee Hormar oo ku yaallo magaalada Galkacyo ayaa bilaaway inuu ku dhiirigeliyo waalidiinta ka soo jeeda deegaanka inay waxbaraan carruurtooda.
Bishii Febaraayo gudaheeda, Iskuulka waxa uu casuumay waalidiin uu kala hadlayey faa’idada ay leedahay in carruurtooda ay usoo diraan iskuulka ayna taageeraan kuwa horay u dhiganayey iskuulka si ay u sii joogaan Dugsiga.
Iskuulka ayaa waxa uu kamid yahay toddobo iskuul oo kala shaqeyso hey’adda CISP Mashruuca Waxbar Gabdhaha Ciribtir Faqriga kaa uu ujeedkiisu yahay sara u qaadidda ka diiwaangelinta iskuulka carruurta da’da yar gaar ahaan gabdhaha ka soo jeedo qoysaska saboolka ah, iyo in lagu taageero inay dhameystaan iskuulka.
Iskuulka ayaa waxa uu sidoo kale kubcinayaa waxyaaabaha wax u fududeeynayo oo qeyb ka ah habkii loo abuuri lahaa deegaan caadi ah oo u taagan ardayda. Waxa uuna arinkani qeyb ka yahay qorshaha hormarinta iskuulka, waxa uuna iskuulka shaqaaleysiyey macalimiin cusub.
Axmed Jaamac, oo ah Sarkaalka u qaabilsan Waxbarashada Gobbolka ayaa u mahadceliyey iskuulka, culimada, macalimiinta iyo martida kale ee xaadirka ahayd. Waxa uu si gaar ah ugu ammaanay waalidiinta sida ay ugu go’an tahay inay carruurtooda ku hubiyaan joogista Dugsiga.
“ Waalid ahaan in carruurta lagu hayo guriga waxa ay keeneysaa faqri, adiga ayaa ah midka ugu horeeyo ee canuga uu leeyahay iyo macalinka ugu muhiimsan. Marka ay Waalidiinta iyo Qoysaska ay ku lug leeyihiin dugsiyada carruurta, carruurta waxa ay sameynayaan wax wanaagsan, waxa ayna u yeelanayaan dareen fiican aadista iskuulka,” ayuu kula taliyey.
W/D: Maxamed Mustaf, Madaxa Shaqaalaha, Galkacyo